Otu esi etinye ma jiri Telnet na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
September 30, 2021 by Jọshụa James
Wụnye ihe nkesa Telnet
Jikọọ na ihe nkesa Telnet gị
Nhọrọ. Tọọ UFW Iwu
Wepụ ihe nkesa Telnet
Telnet bụ protocol na-enye gị ohere ijikọ kọmputa dịpụrụ adịpụ (a na-akpọ ndị ọbịa) n'elu a TCP / IP netwọk na-eji protocol nke ndị ahịa-nkesa iji guzobe njikọ na Protocol njikwa nnyefe ọdụ ụgbọ mmiri nọmba 23
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye Telnet na sistemụ arụmọrụ Debian 11 Bullseye.
Nkuzi ga-egosi gị otu esi etinye ya Telnet maka ebumnuche akụkọ ihe mere eme na ojiji na gburugburu mpaghara, netwọk ndị dịpụrụ adịpụ. A na-atụ aro ka ị ghara iji Telnet na njikọ netwọk mepere emepe na ịntanetị n'ihi na ezipụ data ahụ na njikọ ahụ, gụnyere ozi nwere mmetụta dị ka okwuntughe na ozi nzuzo ndị ọzọ nke na-adịghị ezoro ezo ka data nwere ike dị mfe onye hacker jidere ma jiri ya mee ihe n'ụzọ na-ezighị ezi. Iji jikọọ na sava dịpụrụ adịpụ na netwọk ọha, ị ga-eji ya mgbe niile SSH (Shell echekwara).
Site na ndabara, ebe nchekwa Debian 11 na-abịa na ngwugwu Telnet dị maka ịwụnye site na iji njikwa ngwugwu dabara adaba.
Mbụ, jiri iwu a ka ịwụnye:
Ozugbo etinyere ya, lelee iji hụ na ọkwa Telnet na-arụ ọrụ nke ọma na ihe ndị a:
Nke mbu, ọ bụrụ na etinyere UFW iji jikọọ na Telnet gị na-agba ọsọ, ị ga-achọ ịtọlite ​​​​iwu ikike. Site na ndabara, Telnet na-arụ ọrụ ọdụ ụgbọ mmiri 23.
Ka ịtọlite ​​​​iwu ikike ịbanye UFW enwere ike ime ya n'ụzọ dị iche iche. A na-atụ aro nke ukwuu inye ihe IP nke ejikọta ihe nkesa naanị ma ọ bụrụ na na budata njọ na netwọk. Ahapụla ọdụ ụgbọ mmiri 23 na-emeghe ihe niile, na nke a ga-eduga na brute ike mgbalị.
Iwu maka otu IP:
Hapụ site na subnet:
Ugbu a ị melitela a UFW iwu ka ị nwee ike ijikọ na sava dịpụrụ adịpụ gị Telnet, jiri ihe ndị a (Telnet) iwu:
Iwepu Telnet Gbanyụọ sistemụ arụmọrụ Debian gị, naanị ihe ị ga - eme bụ iji iwu a:
Ị mụtala otu esi etinye ya, guzobe iwu firewall, na jikọọ na sava dịpụrụ adịpụ site na iji Telnet na nkuzi. N'ozuzu, n'ụwa nke oge a, ụdị nkwurịta okwu kachasị dị nchebe nke ọdịdị a bụ iji SSH kama Telnet. Agbanyeghị, gburugburu mmepe nke na-arụ na netwọkụ mpaghara dịpụrụ adịpụ Telnet nwere ike inye aka karịa. N'agbanyeghị nke ahụ, ị ​​​​gaghị agba ọsọ Telnet na netwọk ọha ụbọchị ndị a, ọ ga-emeghekwa ihe nkesa gị ruo a nnukwu ihe ize ndụ n'ime otú ahụ.
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Telnet Mail igodo